I-china iphepha lefektri impahla engcolile imishini yokukhama umshini nabaphakeli | Imishini Yokuceba
Lo mshini usebenzisa umthetho wokukhama ukomisa amanzi emzimbeni, okuwukuhlanza ifilimu lepulasitiki (ifilimu yepulasitiki, ifilimu yesikhumba semifino yezolimo, isikhwama eselukiwe se-PP, isikhwama sesikhumba senyoka, isikhwama sesikhala, isikhwama sethoni, ipulasitiki elincanyana lephepha lepulasitiki) ngokushesha Idivayisi yokukhama amanzi aseplastikini.
1. Umgomo oyingqayizivele wokukhipha amanzi emzimbeni uxazulula inkinga enzima yokuphela kwamanzi emzimbeni okufana nefilimu;
2. Umphumela omuhle wokukhama: kuqinisekiswe ngaphezu kuka-95%;
3. Ubuchwepheshe baseTaiwan, obenziwe eChina, obonga kakhulu;
4. Ukuphela kwamanzi emzimbeni, uma kuqhathaniswa nokomiswa komoya oshisayo kwasekuqaleni, konga kakhulu amandla;
Izimbobo 6.the isikhunta umshini ocindezela kungaba adjustable
Umshini wokucindezela ifilimu ongu-300kg / h